Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Oo Sagootiyay Michael Keating(Sawirro) – Banaadir Times
By banaadir 8th September 2018 147 No comment
Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta kulan sagootin ah Muqdisho kula yeeshay Michel keating oo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay wakiil uga ahaa Soomaaliya intii u dhexeysay 2016-2018.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali khayre ayaa Michel Keating uga mahadceliyay shaqadii wanaagsanayd ee dawladda Soomaaliya uu la qabtay intii dalka ka shaqaynayay, waxa uuna guddoonsiiyay haddiyado ka tarjumaya dhaqanka Soomaaliyeed.
“Waan kuu ognahay dareenkaaga xooggan ee aad u hayso Soomaaliya iyo fahamkaaga ku aaddan ajandaheenna dib u habayneed, gaar ahaan dib u habaynta dhaqaalalaha. Taageeradaada waxa ay qayb ka qaadatay isbedelka muuqda ee dalka, waxa aan kuu haynaa xushmad ballaaran”, ayuu ra’iisul wasaare Khayre ku yiri Michael Keating.
Michael Keating ayaa ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre ku ammaanay dawrka wanaagsan ee hoggaamineed iyo isbedelka muuqda ee ay la timid xukuummadda uu hoggaamiyo.
“Soomaaliya iyo Soomaalidu aad ayay u nasiib badanyihiin maadaama aad ra’iisul wasaare u noqotay. Waxaa kaa go’an wax ka qabashada arrimaha Soomaaliya. Anigana nasiib ayaan leeyahay sababta oo ah dalkaan ayaad ra’iisul wasaare ka noqotay intii lagu guda jiray xilligii aan ahaa wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Maamulkaagu waa astaan ku dayasho mudan, anigana Shaqsi ahaan waan kugu ammaanayaa hawshaas wanaagsan”.
Madaxweyne Farmaajo oo saakay xilli hore gaaray teendhada Afisyooni
Laftagareen oo Odayaasha Dhaqanka kala hadlay xaaladda dalka